musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Latin America Airbnb Nyowani Top 12 Favorites
Airbnb ichangobuda nenzvimbo dzadzo gumi nembiri dzekuzororo kuLatin America.
Iyi inharaunda izere netsika, nhoroondo uye nzvimbo dzinoyevedza dzevashanyi idzo mumakore mashoma apfuura dzawedzera mukurumbira pakati pevashanyi vanobva kuUnited States. Pamusoro pezvo, kuve nenzvimbo yakakura yeLatino, kwagara kuine tsika dzekuenda kunharaunda kusimudzira nekuchengetedza hukama hwemhuri hunodiwa nhasi kupfuura nakare kose.
Zvinoenderana nedatha kubva kuAirbnb, dunhu reLatin America rave tsika kune vafambi vanobva kuUS. Kubva pane huwandu hwekutsvaga kwakaitwa papuratifomu, gumi nemaviri akakurumbira maguta echiLatin ndeaya:
Kana zvasvika panguva yezhizha, nzvimbo dzakakurumbira zvikuru dzaive mahombekombe, kunyanya kuMexico uko Playa del Carmen neEsensenada dzaifamba dzichienda muna 2021, dzichikwira nzvimbo nhanhatu zvichienzaniswa ne6, pamwe neTulum, iyo yakabva panhamba yechinomwe kusvika panhamba 2019. mune rondedzero, zvinoenderana nenhamba yekutsvaga. Nzvimbo dzekuguta dzinoonekerawo kubva pane runyorwa, kusanganisira Mexico City neMedellín, ese ari maviri anozivikanwa nekuda kwavo kwakawanda tsika.
Iyo dunhu inomiririra sarudzo inosvikika kune vashanyi vekuNorth America vane avhareji mutengo husiku husingasvike 150 USD.
"Havasi vafambi vemuUS chete vari kutsvaga nzvimbo dzinopa zvinokwezva zvetsika uye kutiza kwemahombekombe, asi vazhinji vanobva munharaunda yeLatinx vari kutsvaga kubatana nemidzi yavo nekushanyira kwavanobva kuti vaone vabereki, vanasekuru uye mhuri dzakakura. Airbnb inopa mukana wekuwana pekugara mumaguta makuru nemadiki kumatunhu ese, "akadaro Stephanie Ruiz, Director weKutaurirana kweLatin America.